Gịnị bụ a ike mbanye okuku?
A ike mbanye okuku bụ mgbe a ike mbanye-akwụsị ịrụ ọrụ na a sụgharịrị keenweghi ike nke na-ebu ya aga-eme mgbe na-emekarị adịkwa niile data na ya. A ike mbanye nwere ike ugboelu ruru ka a dịgasị iche iche nke ihe. Ihe ndị a nwere ike Olee ihe enyemaka categorized na-esonụ iche iche:
Anụ ahụ Failure
A ike mbanye nwere ike ina ahụ mebiri emebi site na okpomọkụ, mmiri ma ọ bụ na-akpata. Niile nke ndị a nwere ike ime ka oké njọ mmebi a ike mbanye-eme ka ọ ada. Ọtụtụ n'ime ndị ụfọdụ, enweghị ike nke ofufe na-enye ezuru jụrụ ka ike mbanye esighịkwa chịkọbara adịghị na ya nyo akpata okpomọkụ mmebi nke ike mbanye. Mmiri spillage na draịvụ ike cam akpata mmebi ruru ka mmiri mgbe idobe na laptọọpụ nwere ike ime ka ujo mmebi nke ike mbanye.
Logical odida bụ software metụtara na adịghị nwere ihe ọ bụla na-eme na anụ ahụ mebiri. Logical mmebi nwere ike mere site nje, rụrụ arụ faịlụ na mmadụ njehie. Ọdịdị nke ama-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo ọnwụ bụ ihe doro anya nke na-egosi ezi uche mmebi a ike mbanye.
The ike mbanye dere ụfọdụ n'ibu components dị ka diski na-agụ-wet isi. Na oge, ndị a n'ibu components ina njọ ma ghara eme ike mbanye mkpọka. Na ịpị noises si diski ike na-egosi nke n'ibu mebiri.
Olee otú ịgwa ma ọ bụrụ a ike mbanye okuku bụ anụ ahụ nkịtị ike mbanye okuku ma ọ bụ a ezi uche ike mbanye okuku?
Anụ ahụ na ezi uche mmebi nwere ike ọdịiche dị na ndabere nke mgbaàmà na-eduga ọ bụla. Bụrụ na nke a na-ahụ ike mbanye ugboelu n'elu kpo oku ma ọ bụrụ na ike mbanye bụ ihe doro anya nziputa nke anụ ahụ mebiri. Ma, ọ bụrụ na ike mbanye-akwụsị ịrụ ọrụ n'oge na mgbe ọ natara a ujo ma ọ bụ nwere na-ata a mmiri spillage, ọ bụ nchebe na-ekwu na odida bụ anụ ahụ. Logical ike mbanye okuku tupu n'ezie na-eme, ọnọde mgbaàmà dị ka onye na-adịghị usoro ịrụ ọrụ, na-atụghị anya ọnwụ nke data na disk njehie.
Gịnị na-eme mgbe a na-ahụ ike mbanye okuku etịbe
Gbalịa iji weghachite data na nkwado ndabere ha ka ha ebe ọzọ
Ọ bụrụ na draịvụ ike gị bụ ka ike ịkwado ịrụ ọrụ nke gị na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa, ọbụna n'ihi na a obere oge, na-agbalị na-agbake data na mpụga ike mbanye iji a data mgbake software dị ka Wondershare Data Iweghachite. Wondershare Data Recovery Bụ ihe dị mfe iji data nlaghachie software na-ahapụ gị naghachi ehichapụ faịlụ esighịkwa disk mkpọka, nnọọ mfe. Ọ na-akwado a dịgasị iche iche nke faịlụ na ụdị na-nwere ihe abụọ dị iche iche Doppler ụdịdị ka ohere maka irè scanning dị ka kwa onye ọrụ chọrọ.
Lelee ike mbanye ma ọ ka nwere ike na-eji
Were draịvụ ike gị na kọmputa arụzi ka oru ọkachamara e chọpụta ọ bụrụ na ọ ka nwere ike na-eji mgbe ụfọdụ ịrụzi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na gị onwe gị nwere ụfọdụ oru ihe ọmụma, ị nwere ike chọpụta ya ọnọdụ na-ekpebi ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na ya ma ọ bụ tụfuo.
-Ezite ya na ịrụzi ma ọ bụ dochie draịvụ ike gị
Ọ bụrụ na ndị ike mbanye mebiri emebi ma ka nwere ike a rụziri,-ezite ya na a na kọmputa arụzi mere na ọ nwere ike iwere elekọta. Ọ bụrụ na ọ dị gị, e pụtara iji kwalite ka a ọhụrụ ike mbanye ruo oge ụfọdụ ugbu a, i nwere ike iri-erite uru site ohere a ma na-onwe gị ọhụrụ ike mbanye.
Gịnị na-eme mgbe a ezi uche ike mbanye okuku etịbe
Gbalịa naghachi data ọzọ ngwaọrụ
Ihe mbụ ị ga-agbalị ime bụ agbake data ahụ bụ ugbu na draịvụ ike gị dị ka ọ pụrụ isi ike iji weghachite ozugbo ọnọdụ ndị siri ike mbanye njọ. Ojiji nke Wondershare Data Recovery nwere ike na nke a.
Gbalịa Ọkpụkpọ nkebi
Ụfọdụ ezi uche njehie a ga-edozi site na-eme a dị mfe usoro nke ike mbanye na mgbe ahụ na-eme a dị ọcha nwụnye nke sistemụ. Ezie na nke a atọ na-arụ ọrụ dị mfe ezi uche njehie, elu larịị nwere ike mkpa a ntakịrị ihe mgbalị na ịlụ Bibie.
Gịnị na-eme iji zere ma ọ bụ na-adị ndụ ike mbanye okuku
Were ezi-elekọta gị usoro. Zere iwetara eatables karịsịa liquids dị ya nso. Ọ bụrụ na ị nwere butter mkpịsị aka na-a na-echebe ikpe n'ihi na gị na laptọọpụ izere usoro si anata kpọmkwem ihe ịtụnanya.
Mgbe anya maka ihe ịrịba ama na e nwere ike na-egosi na ihe nwere ike na-ezighị ezi na draịvụ ike gị. N'ime akaụntụ ekpo oke ọkụ nke gị usoro na ihe ọ bụla iju noises na-abịa site ike mbanye. Ka anya dị ka ị na-achọpụta ihe ndị a ma ọ bụ ndị ọzọ yiri ihe ịrịba ama, kpọtụrụ draịvụ ike gị emeputa iji nweta ya dochie ma ọ bụ ka ọ rụziri.
Mee mgbe backups gị data mere na bụrụ na nke a ike mbanye okuku ma ọ bụ a omume yiri, ị nwere ike dịkarịa ala nwere niile nke gị data mma na ụda olu.
> Resource> Draịvụ> ihe unu kwesịrị ime ka a ike mbanye okuku?